I-Oceanfront Condo e-Gated Amelia Island Resort! Ukufinyelela Kalula Ebhishi Nephuli!
Fernandina Beach, Florida, i-United States
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Destination Amelia
U-Destination Amelia unokuphawula okungu-52 kwezinye izindawo.
Ngena e-condo 1321 Shipwatch enhle, futhi uzwe izinkathazo zomhlaba ziyancibilika. Le ndawo enekamelo lokulala engu-1, enegumbi lokugeza eli-1 ikhethwe kahle, isanda kubuyekezwa, futhi ifakwe endaweni ephambi kolwandle ye-Shipwatch endaweni ewine umklomelo, enesango le-Omni Amelia Island Plantation Resort emaphethelweni aseningizimu e-Amelia Island. Woza ujabulele ukubaleka kwezothando, impelasonto yegalofu, noma indawo ethule nje yolwandle!
Uma uhlela ukuzodla, izihambeli zingadla kalula noma zipheke ukudla kwazo ekhishini elihlome ngokuphelele elinezinto zikagesi zensimbi engagqwali. Izinketho zokuhlala zihlanganisa ikhawunta ephezulu enezihlalo ezimbili ezibheke ekhishini kanye netafula lokudlela elihle labantu abane. Indawo yokuhlala inikezela ngefenisha esesitayeleni, enethezekile ukuze uhlole inoveli yakho yakamuva noma ubukele izinhlelo zakho ze-TV eziyintandokazi. I-Wi-Fi enesivinini esiphezulu ifakiwe kumhambi wesimanje.
Uma sekuyisikhathi sokuphumula, igumbi lokulala eliyinhloko linakho konke ukunethezeka kwekhaya - umbhede wenkosi, i-TV yesikrini esiyisicaba, ingubo enkulu yokukhipha impahla yakho, kanye negumbi lokugezela eligcwele.
Ngalokhu kuqashwa, izihambeli zijabulela ukufinyelela echibini eliyinkimbinkimbi le-Shipwatch eliwuhambo olufushane nje. Leli chibi elihle liyashiswa ngezikhathi ezithile zonyaka futhi linikeza indawo yokuhlala enkulu yokuthola umthunzi. Kukhona indawo yokosa umphakathi, amatafula epikiniki, nendawo yokubeka ibhayisikili etholakalayo nasezihambelini.
Izivakashi zingajabulela futhi izindlela eziningi zokuhamba nokuhamba ngebhayisikili zale ndawo, kanye ne-spa ye-Amelia Island Plantation, izitolo, nezinketho zokudlela. Igalofu iyatholakala ezifundweni zasendaweni, okuhlanganisa i-Oak Marsh ngaphakathi kwendawo yokungcebeleka.
Sicela wazi, lesi sakhiwo asiqashiswa nge-Omni Amelia Island Resort futhi ayikuniki ukufinyelela “kumalungelo noma izinsiza” (okungukuthi, indawo yokubhukuda eyinhloko, isikhungo sokuzivivinya kanye nesevisi ye-shuttle) futhi iRacquet Park ikhawulelwe kumalungu ekilabhu kuphela. izivakashi zabo ngaphandle uma uhlela izifundo noma ubhalisele umtholampilo Sizophendula ngenjabulo yonke imibuzo emayelana nezinto ezenzeka endaweni kanye nezinsiza zethu.
Sibheke ngabomvu ukuzwa okuvela kuwe futhi sikusize uhlele ukuhlala kwakho kule villa enhle ye-Shipwatch e-Amelia Island!
Ibungazwe ngu-Destination Amelia
Hlola ezinye izinketho ezise- Fernandina Beach namaphethelo